Ndị otu anyị n'ogbe - FES China Limited emeputa & onye na-ebubata ya
Profaịlụ ụlọ ọrụ
Na FES, anyị lekwasịrị anya n'iwulite mmekọrịta ndị ahịa siri ike ma na-adịgide adịgide.Site n'inweta ihe ọmụma na nka dị omimi nke ụlọ ọrụ anyị, anyị na-achịkọta otu ndị ọrụ karịa 120 iji weta ngwọta ntọala ntọala otu nkwụsị maka ndị ọrụ nkwekọrịta zuru ụwa ọnụ.Ndị ọrụ anyị maara nke ọma na ọ dị mkpa ka e ziga ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị n'ebe kwesịrị ekwesị, na ụgbọ njem ziri ezi, ịbịarute mgbe achọrọ ya na otu mpempe.
Anyị na-akpachapụ anya n'inye ngwaahịa kachasị mma sitere na China, ọrụ magburu onwe ya na ọkọlọtọ ụlọ ọrụ kachasị elu na mmepụta ihe ọhụrụ mgbe niile na ngwaahịa ọhụrụ ahụ iji nyere gị aka inwe ọganihu dị ukwuu.
Lelee profaịlụ nke ndị otu igodo ole na ole dịka n'okpuru.
Otu ndị isi ndị isi
Ọkwa:Onye guzobere & Onye isi ala
Mr. Robin Mao- Onye guzobere na onye nwe FES, malitere ọrụ ya na ụlọ ọrụ ntọala ntọala na 1998 dị ka onye isi ahịa ahịa nke IMT drill rigs na China.Ọ mụtara nke ọma uru nke ndị na-egwu mmiri na Europe na-erite uru site na ahụmahụ ọrụ a, bụ nke nyeere ya aka itinye aka n'ụzọ pụtara ìhè n'ịkwalite ngwa ngwa ndị China site n'inye ọtụtụ aro ndị dị irè.
Na 2005, Mr. Robin Mao guzobere FES- otu n'ime ndị ọsụ ụzọ iwebata ngwá ọrụ, ngwá ọrụ na ngwa ndị China n'ọtụtụ mba si China, dị ka Canada, USA, Russia, UAE, Australia, New Zealand, Vietnam, wdg.
Ahụmahụ ya na-eme ka ọ bụrụ ọkachamara na njikwa azụmahịa nke ụlọ na nke mba ụwa.Ọ na-atụkwa anya inyere ndị ahịa aka ịga nke ọma na Quality/ Service/ Innovation.
Ọkwa:Onye isi ọrụ nka
Mazị Ma Liang na-etinye aka na ụlọ ọrụ ikpo ọkụ kemgbe 2005. Ọ bụ ọkachamara na ngwọta nkà na ụzụ, onye na-arụ ọrụ karịa 100 rigs na China.Ọ maara nke ọma ụdị ngwá ọrụ dị iche iche na ahịa na ngwa ntọala kachasị omimi.
Ebe ọ bụ na 2012, ọ na-arụ ọrụ dị ka Chief Technical Officer na FES, tumadi na-ahụ maka mmejuputa atumatu n'ozuzu mkpọpu ihe ngwọta izute ndị ahịa 'chọrọ na mgbe-sales ọrụ-gụnyere ọzụzụ na echichi / ọrụ / mmezi.
Onye isi Dept
Onye njikwa Alaka Indonesia
Onye njikwa akaụntụ
Onye njikwa logistics
Onye njikwa ahịa
Ndị otu Injinia Senior
Mazị Li Zhanling etinyela aka na ụlọ ọrụ igwe ihe owuwu maka afọ 20+.Ọ maara nke ọma na usoro mmepụta ọ bụla nke rotary drill rig ma mara nke ọma na nkà na ụzụ ọ bụla dị mkpa site na mgbakọ ngwá ọrụ ruo n'ịrụ ọrụ, site na nyocha nke ọma ruo na ọrụ saịtị.
Ọ bụ onye FES QC engineer na-elekọta dum mmepụta usoro nke XCMG akụrụngwa cus-tomized site FES.Site na mmalite ruo n'isi, a ga-enyocha akụrụngwa FES ọ bụla, nwalee ma mee ya ọrụ iji hụ na enweghị ntụpọ tupu ebupụta ya.Ọ bụ nkwa nke akụrụngwa FES dị elu.
Maazị Mao Cheng na-arụ ọrụ ire ere, gụnyere akụrụngwa commis-sioning, ọzụzụ ndị ọrụ na mmezi igwe na FES.Ma etinyela aka na ụlọ ọrụ igwe ihe owuwu maka afọ 12+.Maazị Mao Cheng agaala mba ofesi n'onwe ya ọtụtụ oge.
Ọ bụ onye ọkachamara na-ahụ maka ọrụ ubi maka ndị na-egwupụta ihe na ndị na-egwupụta ihe na ndị na-egwupụta ihe ndị ọzọ. Ihe ndị na-agbagharị agbagharị agbagharị na-agbanwe ma kwalite ya bụ ihe niile gosipụtara nke ọma na arụmọrụ na-adịgide adịgide na ogologo oge.
Mazị Fu Lei anọwo na ụlọ ọrụ na-emepụta ngwá ọrụ ihe karịrị afọ 15, otu n'ime ndị injinia na-asụ ụzọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ hydraulic na-emepụta maka ro-tary drill rigs na China.
Ọ na-eduzi nhazi usoro hydraulic na FES.Ọ maara nke ọma n'ichepụta / ngwa / inye ọrụ na nhazi nke igwe na-agbagharị rotary, n'ime nke ọ kachasị mma n'ịgbanwe ngwá ọrụ dịka arịrịọ ndị ahịa si.
Onye mmekọ Strategic nke XCMG:
© 2021 FES.Ikike niile echekwabara
Mgbakwụnye Excavator Drill Maka ọrịre, Hitachi Excavator ezé ịwụ, Pd10 Pile ọkwọ ụgbọ ala, Akwukwo eze, Ụlọ ọrụ Sany Drilling Rig, Ọkpụkpụ nke Casagrande,